August | 2015 | HimiloNetwork
Zakariya August 27, 2015	Leave a comment 588 Views
Soo sawiray: Bahda Himilonews.com Wardhiigleey, Xamar – Dabayaaqada toddobaad kasta, Sahal Baana wuxuu gaari Jente-dieshe ah kusoo galaa laamaha kala duwan ee degmada Wardhiigleey. Wuxuu isa soo taagaa ilinka cid kasta oo macmiil u ah si uu gashinka uga fogeeyo. Bulshada dhexdeeda, tani waa howl aan aad looga tix-gelin ka shaqeynteeda. Hayeeshe, Sahal iyo jaallayaashiisu waxay u arkaan howl muhiimad ...
Zakariya August 19, 2015	Leave a comment 433 Views
Qeybtii 4aad; “Hadda,” ayuu yiri. “Maxaad qabataa?” “Waxna,” ayay tiri. “Balse waxyaabo badan ayaan isku dayay.” Ma aysan doonayn inay u sheegto shaqooyinka fud-fudud ee aan joogtada ahayn ee ay ku howlaneyd kuwaas oo laga yaabay inay shaqooyin ballaaran oo joogto ah ugasii gudbi doonto balse aysan wali helin. “Marka, hadda waxna ma sawirtid miyaa gebi ahaan?” “Kaliya ilinnada iyo ...
Zakariya August 18, 2015	Leave a comment 318 Views
Qeybtii labaad: Dhugasho dheer ayay ku eegtay. Wuxuu ahaa sidiisii. Bidaar kuma sibqin sida ay rag badan oo qeyrkiisa ah ku aragtay. Hayeeshe garbihiisu way fideen; foolkiisuna si aan la dareemayn ayuu u ballaartay. “Waxaan u imid tacsi,” ayuu sii waday. “Geerida aabahay. Wadne qabad ayuu lama filaan ugu dhintay.” “Waan ka xumahay,” ayay tiri. Waxay gocatay siduu aabihii u ...
Jaceyl: sheyga wali aynu dhihin!!
Zakariya August 18, 2015	Leave a comment 489 Views
Qeybta Koobaad: Hortiisa ayuu ka arkay wuuna gartay durbadiiba. Wuu usoo rocleeyey jeer uu garabkeeda kusoo beegmay kadibna wajigeeda hor istaagay isaga oo la yaab ku dhoolla-caddeynaya. Uma aysan muuqan sidii 15-jirkeedii. Judhiiba ma aysan dhugan. Dukaan daaqadiisa ayay wax ka eegaysay. Wuxuu yara jiiday garba-saarkeeda. “Haye, Bullo,” ayuu si edebeysan u yiri. Wuu ogaa inaanu qalad sameyn. Hadda ma ...
Zakariya August 18, 2015	Leave a comment 973 Views
Berbera (Himilonews) – Cilmi Ismaaciil Liibaan, oo Cilmi Boodhari ku magac dheeraa, wuxuu noolaa muddadii u dhaxeysay 1900-1937-kii. Waxa uu ku dhashay miyiga magaalada Hargeysa. Ereyga Boodhari, macno ahaan, waa “Border” oo ah “Xad” ahna erey af-Ingiriisi ah. Cilmi, bilowgii noloshiisa, wuxuu u shaqo tegi jiray xadka. Subax kasta hiirta waaberi ayuu xadka ugu shaqo bixi jiray. Markaas ayaa haddii ...
Zakariya August 18, 2015	Leave a comment 337 Views
Muqdisho (Himilonews) – Muddo maalmo ah oo ay indhaheedu ka abaarsadeem aragtidiisa, waxay dani ku tiri: iila kac dhankiisa. Saa naf wax jecel Allaa dhibaye, waxay isasoo taagtay duleedka gurigiisa. Waxay deymo-xadaysay sidii ay jaahiisa un ugu bikaacsan lahayd. Hadda oo kaliya ma ahan! Muddaba waxay usoo haliili jirtay dhugashadiisa. Mar kasta oo ay jeedaaliso ama ay sheedda ka aragto ...
Zakariya August 18, 2015	Leave a comment 330 Views
Muqdisho (Himilonews) – Ku tilmaamista ay Qaramada Midoobay ku sheegtay mid kamid ah tira-yarta ugu badan ee la dhibaateeyo, Muslimiinta Rohingya waxay ku wajahayaan maalmo ayaan-darraysan oo takooris ah gudaha dhulkooda. Waxaa loo diiday xuquuqda muwaadinimada. Taniyo markii dib-u-habayn lagu sameeyey xeerka muwaadinimo sanadii 1982, Muslimiinta Rohingya waxaa loola dhaqmaa sida soo-galooti sharci darro ku yimid dalkoodii ay ku dhasheen. ...
Zakariya August 18, 2015	Leave a comment 191 Views
Muqdisho (Himilonews) – Kororka fahmeedka nolosha dhabta ah ee Islaamku tilmaamayo iyo macnaha qotada dheer ee laga dheehan karo xeerarka hadba sah kasta oo la joogo dhaqan-galka noqon kara oo uu sido, ayaa dhawaanahan waxaa isasoo taraya baahi loo qabo in nolosha oo dhan lagu wada hago. Gaal iyo Muslimba waxaa muuqata inuu diiradda u saaran yahay. Dhacdooyin lasoo maray ...
Zakariya August 18, 2015	Leave a comment 415 Views
Muqdisho (Himilonews) – Markii ugu horreysay ee aan maqlay dhimashadiisa, way igu adkeyd inaan si fudud ku rumeysto. Waayo wuxuu ahaa nin damac yar: ku feejigan kaliya waxa hortiisa ah: meel dheer oo halis ka sokeysana aan naftiisa ku biimeyn. Waana sidaan sababtii ay iiga soo degi waysay inaan si fudud ku rumeysto inuu xadaafiir ku go’ay. Balse runtu waa ...
Kulanka labada Haldoorro!!
Zakariya August 18, 2015	Leave a comment 188 Views
Muqdisho (Himilonews) – Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa marti-galisay markii ugu horreysay wiilasha ugu caansan raadeynta dunida. Suldaan Kusii, oo ah ninka ugu dheer dunida, kaas oo dhirirkiisa lagu qiyaaso 2.46 mitir oo qumaati ah, wuxuu xaflad is-barasho ah ku qaabilay ninka koobka ku qaatay caksigiisa sara-joognimo ee gaabnimada—ahaana marti sharaf socdaal dheer uga yimid. Waa ninka reer Mangooli ...
Haweeney Filastiiniyad ah oo geesimo ku shahiiday
Qashinka Tuban Suuqa Cilmiga iyo Cibaadada ee Xareed.
La kulan – Maalqabeenka loogu yeero Mudanaha Nadaafadda
Q3aad: Ereyo iyo Oraahyo Jaceyl Xanbaarsan.